Ka wada shaqeynta dib u heshiisiinta bulshada Gobollada dhexe oo laga shiray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ka wada shaqeynta dib u heshiisiinta bulshada Gobollada dhexe oo laga shiray “SAWIRRO”
Kulan looga hadlayey sidii loo xoojin lahaa dib u heshiisiin bulshada ku dhaqan Gobalada Mudug iyo Galgaduud oo ay ka qeyb galeen siyaasiyiin, waxgarad, qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka Madaxweynaha maamulka Gobollada Dhexe ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho si loogu guulaysto dhismaha maamulkaasi.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradkii kulanka ka qeyb galay oo hadalo kala duwan goobta ka jeediyay ayaa soo dhaweeyay shirka looga hadlay sidii dib u heshiisiin loo dhex dhigi lahaa shacabka ku nool gobollada dhexe ee dalka, iyagoo ku baaqay in laga wada shaqeeyo dhismaha maamul u sameynta Gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Xasan Maxamed Nuur oo ka mid ah musharixiinta u taagan qabashada xilka Madaxweynenimo ee gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa ku baaqay in dib u heshiisiin la sameeyo, isla markaana ay u midoobaan sameynta maamul loo dhanyahay.
Danjirihii hore ee Soomaaliya ee Koonfurta Sudan ahna Musharax u taagan xilka Madaxtinimo ee gobollada Dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Diinaari ayaa sheegay in xilligan loo baahanyahay sidii shacabka u istaagi lahaayeen ka shaqeynta horumarinta adeegyada aas aasiga u ah bulshada, waxaana uu intaa ku daray in shacabka la gaarsiiyo go’aanada shirka ka soo baxay.
“Waxaan isku afgaranay in aan dhamaanteen u istaagno ka shaqeynta dib u heshiisiinta, dhismaha maamul loo dhanyahay iyo horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada” ayuu Cabdiraxmaan Diinaari hadalkiisa ku daray.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalmahan ka socday shirar looga hadlayay dhismaha Maamulka Gobolada dhexe ee dalka.
Xaafad cusub oo dhismayaal casri ah leh oo la hirgelinayo degmada Yaaqshiid "SAWIRRO"